Chii chinoitwa nemubatsiri wevanamukoti? | Kuumbwa uye kudzidza
Maite Nicuesa | 06/06/2021 10:00 | Kudzidziswa
Iwo mabasa ehutano, ayo ane akakosha kuoneka nhasi, mapoka akasiyana akasiyana profiles. Iyo vabatsiri vevanamukoti Ivo inyanzvi dzinoita mabasa akakosha mukuchengeta varwere.
Vamwe vanhu vanogamuchirwa kuchipatara havana kuzvitonga kwakakwana kuita mabasa ezuva nezuva. Ipapo, mubatsiri wevanamukoti ane basa rekupa rubatsiro urwu. Semuenzaniso, rimwe remabasa anoitwa nenyanzvi iyi kugovera mamenyu echikafu.
1 Inobatsira varwere mukuita akasiyana mabasa
2 Thermometric data kuunganidzwa
3 Kufambidzana uye kutsigirwa
Inobatsira varwere mukuita akasiyana mabasa
Vamwe varwere vangangoda rubatsiro rwekunze kuti vadye. Vamwe vanhu havana kufamba kunodiwa kuti vaite hutano hwakasiyana. Mune aya mamiriro ezvinhu, mubatsiri ndiye anotarisira kubatsira mushandisi. Rimwe remabasa makuru emubatsiri wevanamukoti ndere vanopa kugara vachiperekedza varwere pamwe nemhuri dzavo. Ndiye munhu akasarudzika uyo ari chikamu chetsika yeavo vanokanganiswa nechimwe chirwere. Iye munhu aripo uye, nekudaro, anotarisa shanduko uye kukura kwemurwere.
Iye ari zvakare mutariri wekugadzira mibhedha, achichengeta zvinhu zvebasa zvakarongeka, achibatsirana mukugadzirira izvo zvinodikanwa zviridzwa zvekujekesa kwakasiyana kweyedzo yekurapa.
Thermometric data kuunganidzwa
Mabasa eiyi nyanzvi akaumbwa mune yakasarudzika mamiriro epakati pezvavanoshanda. Sezvo, zvataurwa izvi zvinogona kushanda muchipatara, munzvimbo yehutano, mune yekugara yevakweguru kana munzvimbo dzekuchengetedza dzepamoyo. Basa reuyu nyanzvi rinotsigirawo mukoti uye chiremba. Inoshanda mukubatana pamwe nedzimwe nhengo dzechikwata. Naizvozvo, iwe unogona kutora hanya kugadzirira zvakakosha zvinhu kune nyanzvi kuti iite rakanangana nebasa. Semuenzaniso, nguva dzose nekutarisirwa kwemunhu anotungamira, unogona kuita muunganidzwa weiyo thermometric dhata.
Kushanda muchikwata ndechimwe chekugona kunoenderana nebasa iri. Iyo nyanzvi chikamu chehurongwa hwakarongeka zvakakwana uye, nekudaro, inoshanda pamwe chete kuzadzisa zvinangwa. Pamusoro pezvo, iri ibasa rehunyanzvi rinounza mufaro wechokwadi parinotanga kubva pane ichi chishuwo chekuzadzikiswa kwega.
Kufambidzana uye kutsigirwa
Kunyangwe kana vaviri varwere vaine chirwere chakafanana chekurapwa, mumwe nemumwe anowana chokwadi chake kubva kune chaiwo uye mamwe mamiriro. Rutsigiro rwepamoyo rwakakosha kwazvo kune avo vanonzwa vasina njodzi. Izvi zvinoenderana hazvigone chete kubva murudo rwehama dzepedyo uye mhuri. Vashandi vezvehutano vanoshandisawo huchenjeri hwepamoyo mukuita kwavo kwemazuva ese. Ivo vanoita mutsa, moyo murefu, kusimbisa, tariro, kugona munharaunda, mutsa, uye tsitsi.
Nechikonzero ichi, mubatsiri wevanamukoti anosimbisa kusimba kwemurwere nehuvepo hunoziva. Kana uyu nyanzvi akaona chero ruzivo rwakauya kwavari zuva rekupedzisira, ivo vanozivisa chiremba kana mukoti nezvenyaya iyi. Iyi nhoroondo inogara ichishanda pamwe nechikwata kuzadzisa chinangwa chimwe chete: kupa kwakanakisa kurapwa kwevarwere munzira yavo yekudzoreredza. Aya ndiwo mamiriro ezvinhu umo basa ravo rezuva nezuva rakagadzirwa. Humwe hunhu hunodiwa nemushandi kugona kugona kuteerera. Murwere anoda kunzwa anzwikwa nekuti, kubva pakuona kwevanhu, vanogona kusangana nekukahadzika, kutya kana kusava nechokwadi. Uye kuiteerera kunodzikamisa uye kunoderedza kunetseka.
Vamwe vanhu vanosarudza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo mushure mekuwana zita rekuti Nursing Assistant. Uye aya mamwe emabasa anoitwa nehunyanzvi uyu anoshanda nekuzvipira kwakadai mumunda wehutano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Noticias » Kudzidziswa » Chii chinoitwa nemubatsiri wevanamukoti?